धेरै मानिसहरू छिट्टै सफलताको शिखरमा पुग्न चाहान्छन् । धेरै मानिसहरू आफैमाथि प्रश्न गर्छन् म कसरी सफल हुन सक्छु ? व्यवसायीहरू सोच्छन् छिट्टै धनी कसरी बन्न सकिन्छ ? विद्यार्थीहरू सोच्छन् परीक्षा सबैभन्दा राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ ? यस्तै यस्तै । तर, सफल व्यक्तिहरू भन्छन् सफलताका लागि धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । आउनुहोस् जानौ सफलताका लागि तपार्ईले ध्यान दिनुपर्ने तीन सुत्र ।
धन्यवाद दिनुहोस्-यदि तपार्ईले कसैको सहयोग लिनु हुन्छ भने उसलाई धन्यवाद भन्न नभुल्नुहोस् । धन्यवाद दिने र आभार व्यक्त गर्ने मानिसहरू सधै हल्का महसुस गर्छन् । यस्ता व्यक्तिहरू कहिल्यै पनि चिन्ता लिदैँनन् । उनीहरू आफ्ना लागि मात्र नभएर समाज अनि देशका लागि सकारात्मक चिन्तामा लाग्छन् । उनीहरू सधैभरी अरुको सहयोगमा तत्पर रहन्छन् ।
जिम्मेवारीलाई शक्ति सम्झनुहोस्- जिम्मेवारी एक यस्तो सुत्र हो, जुन कहिल्यै पनि दिइदैन्, यसलाई लिन सकिन्छ । यसलाई लिन धेरै मानिसहरू तयार हुँदैनन् । यदि तपार्ई जिम्मेवारी लिन तयार हुनुभयो भने अवस्य सफल हुनुहुनेछ ।
ख्याल गर्नुहोस् जिन्दगी चुनावको परिणाम हो- तपार्ई जीवनमा कस्तो विचार तथा कस्तो व्यवहार रोज्नुहुन्छ, यसको सिधा असर तपार्ईको काममा पर्दछ । तपार्ईको जिन्दगीको चुनाव अरु कसैले गर्न सक्तैनन् । यसको लागि तपार्ई कसैसँग निर्भर रहनु हुँदैन् । यदि तपार्ई आफ्नो जीवन परिर्वतन गर्नका लागि आफूलाई तयार गर्नु भएन भने जीवन परिवर्तन गर्न सकिदैन् । यसकारण सधै सहि बिचार र व्यवहारको छनौट गर्नुहोस् ।
बिश्व प्रसिद्ध फ़ेशन डिजाइनर, ब्लगर एवम् लेखक किर्जिदा रोड्रिग्ज १०…
जिन्दगीमा भागदौड यतिधेरै भएको छ कि, हाम्रो दिमागले एकैपटकमा धेरै…
तपाईंको बैंक एकाउण्टबाट पैसा त हराईरहेको छैन् ? सावधान यस्ता एपले चोर्छन् पैसा
स्यानिटाइजरको प्रयोग कति खतरनाक ? हुनसक्छ यस्ता समस्या
आईपिएलका लागि युएई हिडेका सन्दिपको छुट्यो फ्लाईट २ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़
२८ भदौँ, काठमाडौँ । नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दिप लामिछाने…